से,क्स भ,नेपछि म भु,तुक्कै हुन्छु ! सरिता…… – Sidha Post 24
से,क्स भ,नेपछि म भु,तुक्कै हुन्छु ! सरिता……
हँसिली र स्टाइलिस कपडामा सजिएकी सन्ध्याले आफ्नो उमेर ४० वर्ष पुगेको बताउँदा पत्याउन गाह्रो हुन्छ ।‘तपाईं मुस्किलले ३० वर्षकी देखिनु हुन्छ । यसको रहस्य के हो ?’ सन्ध्याको उत्तर थियो, ‘प्रेमी छैन, श्रीमान् छैन, परिवार छैन र तनाव पनि छैन ।’
सन्ध्या बंसल एक नामी कम्पनीमा मार्केटिङ अफिसरका रुपमा काम गर्छिन् । उनी दिल्ली एनसीआरमा फ्ल्याट लिएर एक्लै बस्छिन् । उनी एक्लै बस्नुको कारण हो, उनमा यौ न चाहना छैन । केटा वा केटी कसैप्रति पनि उनी आकर्षित हुन सक्दिनन्। अर्थात् उनी ‘एसे’क्सुअ’ल’ हुन् ।
जति पटक उनको सम्बन्ध शारीरिक सम्पर्क नजिक पुग्यो, त्यति नै पटक पछि हट्न बाध्य हुन्थिन् । उनले यो समस्या साथीहरुलाई सुनाइन् । उनीहरुले डाक्टरसँग सल्लाह लिन सुझाए । तर, डाक्टरकहाँ जानुअघि उनले यसबारे आफैले इन्टरनेटमा पढ्न र बुझ्न थालिन् । उनी सामाजिक सन्जालमा ‘ए’से’क्सुआ’लि’टी’ सँग सम्बन्धित केही समूहमा पनि जोडिइन् ।
‘कैयौं मानिस ए’से’क्सुअल हुन्छन् तर उनीहरुलाई यसबारे सही जानकारी नहुँदा दुःख पाइरहेका हुन्छन् । सामाजिक र पारिवारिक दबाबका कारण आफ्नो यौ’निकतालाई गोप्य राख्न उनीहरु बाध्य छन्,’ उनी भन्छिन् ।
जवाफमा उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म म एक्लै छु । मलाई लाग्छ, पछिसम्म एक्लै नै हुनेछु । मेरा साथी, म बस्ने भवनका मानिसहरु नै मेरा परिवार हुन् । हामी अलग अलग कोठामा बस्छौँ तर हाम्रो भान्सा एक छ ।
हामी भेट्छौं, दुःखसुखका कुरा गर्छौँ । हामी परिवार हौं । परिवार मेरो पहिचान भन्दामाथि हाबी नहोस भन्ने मेरो धारणा छ ।’ यद्यपि मन मिल्ने मान्छे भेटिए त्यस्तो व्यक्तिसँग उनी जीवन बिताउन तयार छिन् । तर, यो सम्बन्धको आफ्नै दायरा हुनेछ ।
‘मानिसहरु प्राय मलाई बुढेसकालमा बच्चाले तिम्रो साथ दिन्छ भनेर सम्झाइरहन्छन् । तर, सबै बच्चाले आफ्ना आमाबुबालाई बुढेसकालमा हेरचाह गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘म बुढेसकालका लागि यतिबेला पैसा जम्मा गरिरहेको छु, लगानी गरिरहेको छु ।
मलाई थाहा छ म एक्लै छु र आफ्नो ख्याल आफैँले राख्नुपर्छ त्यसैले म आफ्नो शरीरको राम्रो हेरचाह गर्छु, स्वस्थ्य खाना खान्छु, योग गर्छु र कुनै फैसला लिनुभन्दा अगाडि राम्रोसँग सोच्छु ।’
परिवार र छिमेकीले विवाह गर्न दबाब दिएपनि उनले सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी छिन् । ‘मेरो कान्छी बहिनीको विवाह भइसकेकोले ममाथि विवाहको दबाब झन् बढेको छ,’ उनी सुनाउँछिन्,
‘म कसैको कुरा सुन्दिनँ । म यसबेला एक्लै छु । एक्लै खाना खान्छु, किनमेल गर्न जान्छु । बिरामी हुँदा आफैँ अस्पताल जान्छु । विवाह जरुरी छजस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो हिसाबमा जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वतन्त्र र शान्त जीवन बाँच्नु हो ।’
फे-रि अर्को लाहुरे का’ण्ड श्री’ मतीलाई आफ्नै सा’ थीसँग लजमा यस्तो अवस्थामा भटे पछि भिडियो सहित !